Etu esi tinye asụsụ ọhụụ ka ịgwa gị okwu na Google Assistant | Gam akporosis
Google Assistant nwere ike ịsụ ọtụtụ asụsụ, nwedịrị ike ịsụ asụsụ abụọ n’otu oge, ma ọ bụ ghọta ha. Yabụ, ọ bụrụ na ị na-asụ asụsụ abụọ ma ọ bụ na ị chọrọ ịnwe ikike ịmụ asụsụ ọzọ yana onye inyeaka na ekwentị gam akporo gị, ịnwere ike ịgbakwunye asụsụ ọhụrụ ị ga-eji soro ya kwurịta okwu. Nke a dị mfe.
N'ụzọ dị otú a, ị ga-enwe ike ịgwa Google Assistant na ekwentị gam akporo gị iji asụsụ ọ bụla, mgbe ị na-ajụ ase ma ọ bụ na-enye onye inyeaka iwu. Yabụ ọ nwere ike ịbụ ụzọ dị mma iji tinye ihe ọmụma gị n'asụsụ ahụ.
Nzọụkwụ dị na nke a bụ otu ime ka o kpo anyi aha ozo. Nke mbu, anyi ga emeghe Google Assistant na ekwentị gam akporo anyị. Ozugbo emere nke a, pịa akara ngosi na-egosi na ala aka ekpe nke ihuenyo ahụ, nke na-akpọrọ anyị na ihuenyo ọhụrụ. N'ebe a, anyị pịa foto profaịlụ anyị, iji tinye ntọala.
Yabụ, anyị na-aga ngalaba enyemaka, nke anyị nwere na taabụ elu. N'ime nkebi a ka anyi hu na ihe mbu bu Asusu, nke anyị na-pịa. N’ebe a ka a ga-egosipụta asụsụ ma ọ bụ asụsụ nke anyị na onye na-enyere anyị aka iji kwuo okwu.
Ọzọ anyị ga-agbakwunye asụsụ ndị anyị chọrọ, nke anyi ga eji nwee ike isoro Google Assistant nwee mkparita uka. Ndepụta asụsụ nke onye inyeaka na-aghọta dị oke na nke a, nke mere na anyị ga-enwe ọtụtụ nhọrọ ịhọrọ site na nke a. Yabụ ịnwere ike itinye karịa otu na nke a.
Ozugbo agbakwunyere ha, anyị nwere ike ịhapụ ngalaba a ugbu a. Oge ọzọ anyị ga-eji Google Assistant na gam akporo, anyị nwere ike ịjụ ase ma ọ bụ nye gị iwu n'asụsụ ọ bụla. Ya mere, ọ ga-ekwe omume ịchịkwa ya n'ụzọ dị otú a. Na mgbakwunye, anyị nwere ike ịgbanwe asụsụ n'etiti mkparịta ụka. Ọkachamara ga-agbanwe asụsụ yana.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Nkuzi » Etu esi tinye asụsụ na Google Assistant